ICosta Cruises iqeda ukusebenza komkhumbi wokuqala we-LNG e-Italy
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ukuhamba ngesikebhe » ICosta Cruises iqeda ukusebenza komkhumbi wokuqala we-LNG e-Italy
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba Zase-Italy • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ubuchwepheshe • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Ezihlukahlukene
ICosta Cruises, umzila omkhulu wokuhamba ngesikebhe waseYurophu futhi oyingxenye yeCarnival Corporation & plc, namuhla umemezele enye ingqophamlando yeCosta Smeralda, umkhumbi wokuqala womugqa ophehlwa yigesi yemvelo (LNG), ngomsebenzi wokubopha we-LNG owenziwe ngempumelelo ngo-Okthoba 25 okokuqala e-Italy.
Kwenziwa ethekwini laseLa Spezia kwaqedwa ngo-6: 00 ntambama, lo msebenzi wasekelwa yi-Italian Coast Guard, Port Authority yase-Eastern Ligurian Sea, iziphathimandla zendawo kanye no-Shell, ongumlingani wabaphakeli be-LNG weCosta Group kanye nomzali wayo inkampani, iCarnival Corporation.
Lo msebenzi wenziwa ngomkhumbi obekwe esikhumulweni semikhumbi i- “Molo Garibaldi”, lapho umkhumbi obhidlika khona uCoral Methane ububekwe eceleni (kukhothama) uCosta Smeralda, ngaphansi kweso le-Italian Coast Guard kanye nokusebenzisana nazo zonke izinhlaka ezithintekayo nabasebenzi weCosta Smeralda noCoral Methane.
"Njengengxenye yokuzibophezela kwethu okujulile ekusimeni, siyaziqhenya ngokuba ne-LNG-powered flagship Costa Smeralda uphawu lwalo mlando e-Italy kanye nechweba laseLa Spezia," kusho uFranco Porcellacchia, iphini likamongameli wezokuthuthukiswa okuqhubekayo nokuthuthukiswa kwengqalasizinda yeCosta Group . "I-Carnival Corporation neCosta yibo abasebenza ngesikebhe sokuqala ukutshala imali emisha ngobuchwepheshe bemikhumbi obusetshenziswa yi-LNG futhi siyaqhubeka nokuzibophezela ekuqinisekiseni amazinga aphakeme kakhulu ezemvelo ngekusasa eliqhubekayo lokuhamba ngesikebhe."
“Ngombhoshongo we-LNG obuseLa Spezia, siphinde samaka ama-50th ukusebenza ngempumelelo komkhumbi weCosta Group, ”kusho uTom Strang, iphini likamongameli omkhulu wezindaba zasolwandle eCarnival Corporation. “Lesi esinye isinyathelo esibalulekile esisizuzile ngokusebenzisana nabalingani bethu, njengoba siqhubeka nokukhombisa ukuzibophezela kweCarnival Corporation ekusimameni nasekuthuthukiseni ubuchwepheshe obuthuthuke kakhulu obutholakala namuhla. Siseqhulwini ekuthuthukiseni i-LNG njengomthombo kaphethiloli embonini yezokuvakasha futhi sisebenzela ukwakha ingqalasizinda ye-LNG ebanzi, ephephile nethembekile yemikhumbi yezokuvakasha emhlabeni wonke. ”
"Inhloso yeqembu lethu ebelisebenza bekuwukusebenzisa imithetho nezinqubo ezifanele ukuqinisekisa amazinga aphezulu okuphepha, kuqalwa ngokuzulazula, ukuvikelwa kwemvelo, ukuvimbela umlilo nokuphepha emsebenzini," kusho UGiovanni Stella, ukaputeni weLa Spezia Coast Guard. “Yonke imishanguzo eyamukelwa yagcinwa ngokufanele futhi saneliseka ikakhulukazi ngokuthi ukuhlinzwa kwavela njalo. Ngenxa yalolu lwazi oluhle, sikholwa ukuthi ezinye iziphathimandla zasolwandle zingayisebenzisa le mithetho esiyichaze ngenhloso yokwandisa ingqalasizinda yokusatshalaliswa kwe-LNG emachwebeni ase-Italy, njengoba kukhonjiswa yimithetho yase-Italy neyaseYurophu. ”
“Ingqophamlando ebaluleke kakhulu yafinyelelwa okokuqala ezweni lethu, futhi ethekwini laseLa Spezia,” kusho UCarla Roncallo, umongameli wePort Authority ye-Eastern Ligurian Sea. "Ngithanda ukubonga ikakhulukazi uLa Spezia Coast Guard kanye noMnyango Wezasolwandle waseLiguria, abathi ngokubambisana neCosta Cruises bakwazi ukwenza lo msebenzi, bahlala begcina ukuphepha kuqala."
ICosta Smeralda ngumkhumbi wokuqala onamandla we-LNG emikhunjini yaseCosta Cruises, futhi uzolandelwa nguCosta Toscana, umkhumbi ongudade we-LNG ohlelwe ukulethwa ngasekupheleni kuka-2021. Omunye umkhumbi we-LNG, i-AIDAnova ovela e-AIDA Cruises, ubusebenza ngaphakathi kweCosta Imikhumbi yeqembu kusukela ngo-2018 futhi uzolandelwa eminye imikhumbi emibili engodade ngo-2023.
Njengengxenye yemikhumbi yonke yeCarnival Corporation, kusanda kwethulwa umkhumbi wesithathu osebenza nge-LNG, iP & O Cruises UK's Iona. I-LNG, ubuchwepheshe obuthuthukiswe kakhulu embonini yezasolwandle, ithuthukisa kakhulu ukukhishwa komoya okuphelele ngokuqedwa okungokoqobo kokukhishwa kwesulfure dioxide (zero emissions) kanye nokwehliswa kwama-95% kuya ku-100% ezintweni ezithile. Ukusetshenziswa kwe-LNG futhi kunciphisa kakhulu ukukhishwa kwe-nitrogen oxide ne-carbon dioxide ngo-85% no-20%, ngokulandelana.
Abantu abaningi balimele ekuqhumeni kwebhasi laseRussia
AmaTaliban asebenzisa ama-Islamic Emirates e-Afghanistan athande ...
Abalawuli baseChina bathi cha 'okungenampilo' ...
Ubungozi Bamafoni, Amakhompyutha Nobuchwepheshe ...
UNgqongqoshe Wezokuvakasha Unxusa Abasebenzi Bezokuvakasha ukuthi bathole ...
Izivakashi Ezigonywe Ngokugcwele Zase-US nase-EU Zizoba Yisibusiso ...
Ukukhuthaza ukhiye we-adventure emngceleni wase-US nowaseCanada ...
I-Russia ukwengeza i-Module Yezokuvakasha Esiteshini Sayo Sendawo Esilandelayo
Ukuvakashela isigodlo sikaMongameli eKabul neTaliban ...